muqdisho Archives - Ceelhuur Online
Home > Posts Tagged muqdisho
July 7, 2018 admin839
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in gebi ahaanba howlgalkii argagixisada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen xarunta Wasaaradda Arrimaha gudaha, oo u dhaw Taallada Sayidka, in la soo afjaray. Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in la laayay dhamaan maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday, isla markaana ciidamada amaanka […]
July 6, 2018 admin700
Cabdullaahi Roob da’ay oo markale lagu xiray Muqdisho
July 4, 2018 admin796
Afhayeenkii Maamulka Galmudug Cabdullaahi Xaashi Faarax Roob Da’ay ayaa maanta markale lagu xiray Magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta danbi baarista CID ee ciidanka Booliska Soomaaliya. Cabdullaahi ayaa lagu xiray warqad ka soo baxday Qeybta Baarista Danbiyada ee Ciidanka Booliska, waxaana ku saxiixnaa G/Sare Cumar Cabdi Cilmi. Dad goobjoog ahaa ayaa inoo xaqiijiyey in masuulkan laga […]
Dhageyso: Muran ka dhashay Hub usoo degay dowladda Somalia
July 3, 2018 admin654
Muran ayaa ka dhashay hub ay dawladda Soomaaliya 22-kii bishii aynu soo dhafanay kasoo dejisay garoonka diyaaraha ee Muqdisho. Hubkan ayaa ka kooban qoryaha AK47 oo la ii sheegay inay gaadhayaan 300 qori iyo bastoolado iyaguna gaadhaya 300, rasaas iyo qalab kale oo milatari. Warar xogogaal ah ayaa sheegaya in hubkan la geeyey kayd hub […]
RW Khayre Oo Shir-gudoomiyay Kulanka Tubta Siyaasadda loo Dhanyahay (Sawirro)
July 3, 2018 admin752
Ra’iisul Wasaaraha Xukuummadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shir-gudoomiyay kulanka Tubta siyaasadda loo dhanyahay oo looga hadlayay dabagalka iyo dhaqan gelinta qodobbadii kasoo baxay shirkii amniga Qaranka ee Baydhabo iyo diyaar garowga shirka Madasha Iskaashiga Soomaaliyeed (Somali partnership forum) ee dhawaan ka dhacaya magaalada Brussels ee dalka Belgium. Wasiiru dawlaha xafiiska Ra’iisul Wasaaraha […]
July 2, 2018 admin768
Afhayeen Dowlad goboleedka Galmudug Cabdullaahi Xaashi Faarax Roob Da’ay ayaa ka hadlay xarig iyo jirdil ay u geysteen ciidanka NISA, Afhayeenka ayaa maanta lagu xiray Magaalada Muqdisho inkastoo mar dambe lasoo daayey. Halkaan ka daawo shirka jaraa’id ee afhayeenku ku faafaahinayo sida wax u dhaceen.
Bajaajle lagu toogtay Magaalada Muqdisho
July 2, 2018 admin939
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Wiil dhalinyaro Mooto Bajaajle ah oo saakay lagu dilay degmada Hodan gaar ahaan Barkontorool oo ciidanka xasilinta ay ku leeyihiin halka loo yaqaano sarta Seybiyaano. Dadka degaanka ayaa waxa ay inoo sheegeen dilkan inuu yimid kadib markii askartii joogtay Barta ciidan ay Mooto Bajaajlaha ku amreen inuu istaago […]
July 2, 2018 July 2, 2018 admin751
Dhaqtar Magaciisa Diidey in loo adeegsado Warbaahinta ayaa waxaa uu sheegey in ay aad ugu dhib qabaan Wadooyinka xiran ee Magaalada Muqdisho isagoo sheegey in ay Quus ka joogaan in ay ka Howl,galaan Goobaha Caafimaadka Magaalada. “Hadii ay Dowladu sheegtey in ay Naf Badbaadinayaan, anagana Naf baan Badbaadineynaa, waxaa Maalin waliba nalaga Hor istaagaa in […]
July 1, 2018 admin694
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya (XFS), waxay martigelisay kulankii Shanaad ee Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka oo ay kasoo qeybgaleen Wasiirada Darstuurka ee Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka iyo Maamulka Gobolka Banaadir kaasoolagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 29-30 Juun 2018. Kulanka waxaa si rasmi ah u furay Wasiir Ku-Xigeenka […]